AMP-ku-xirnaanta oo leh shaqeynta liiska tooska ah ee AMP - SO
AMP-ku-xirnaanta oo ay la socoto shaqada liistada tooska ah ee AMP
(!! Si ku meel gaadh ah ayaa loo gooyey !!)
Soo -saareyaasha Boggaga Mobilada ee Dardar -galiyay (AMP) si loo abuuro boggaga AMP -ka Google, plugins -ka AMP iyo soo -saaraha sumadda AMPHTML waxay adeegsadaan hawsha liiska AMP tooska ah waxayna si otomaatig ah u dhaqaajiyaan cusboonaysiinta xogta tooska ah ee bog kasta oo AMP ah oo la soo saaray.
<amp-live-list> -Tag isdhexgalka
Generator-ga xawaareysan ee loo yaqaan 'Accelerated Mobile Pages Generator' wuxuu si otomaatig ah u abuuraa nooc AMP ah oo leh maqaal toos ah oo cusbooneysiinta maqaalka ah iyadoo la adeegsanayo sumadda <amp-live-list>. Sidan oo kale, dhammaan boggaga AMP waxay leeyihiin nooc ka mid ah waxqabadka barta tooska ah.
Haddii isticmaale uu fiiriyo nooca AMP ee mareegaha oo ay jiraan astaamo cusub oo loogu talagalay boggan AMP inta ka horreysa, bogga AMP wuxuu aqoonsan yahay in nooc cusub oo cusub oo la heli karo la heli karo.
Bogga AMP wuxuu ogeysiinayaa adeegsadaha cusbooneysiinta maqaalka jira inta uu wax aqrinayo, iyadoo uusan isticmaaluhu dib u soo dejin bogga AMP!
Badhan ayaa loo muujiyaa isticmaalaha ujeedadan. Haddii isticmaaluhu riixo badhanka cusbooneysiinta maqaalka AMP, nooca cusub ee AMP ayaa isla markiiba ku shuban xawaaraha AMP ee la yaqaan! Tani waxay awood u siineysaa waqtiyada wax rarida oo ka gaaban kuwa dib loo buuxiyo oo had iyo jeer ka dhigaya isticmaaleha inuu cusbooneysiiyo.
Generator-ga xawaareysan ee loo yaqaan 'Mobiles Pages Generator' wuxuu abuuraa bog AMP ah oo codsi u diraya server-ka bogga AMP (tusaale ahaan serverka Google) 16-kii ilbiriqsi kasta wuxuuna hubiyaa in nooc maqaal cusub ah la heli karo iyo in kale. Haddii nooc maqaal cusub uu jiro, bogga AMP wuxuu ku tusayaa isticmaalaha ogeysiiska cusboonaysiinta AMP qaab badhanka cusbooneysiinta maqaalka.